musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sri Lanka Kuputsa Nhau » World Fashoni: Basa reTaiwan neSri Lanka mutsika dzepasirese
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Fashoni Nhau • Sri Lanka Kuputsa Nhau • Taiwan Kupwanya Nhau
Musi waGumiguru 6, Taipei Fashoni Vhiki rakaparura zviri pamutemo "Fashoni Yedu Nguva," chiratidziro chinotungamira vateereri kuburikidza neanopfuura hafu yezana ramakore ekurangarira kwefashoni kuTaiwan kuburikidza nezvinoitika chaizvo-zvepasirese uye nyaya dzemifananidzo.
Iyo Taipeh Yemafashoni Svondo icharatidzawo mabasa epakutanga nevanozivikanwa veTaiwanese vagadziri, vachiratidza kuti dzakasiyana dzakasiyana dzakakanganisa sei indasitiri yemafashoni epamba uye mafashoni airatidzwa sei kuTaiwan panguva dzino. Inotsigirwa nebazi rezvetsika nemagariro, iyo Fashoni yeNguva Yedu inoratidzira kubva kuma1950, yaive nguva yegoridhe yeindasitiri yemachira yeTaiwan, kusvika panguva ino.
Kubudikidza nekuburitswa kwezviitiko zvekare, mafashoni ekuratidzira, uye makoramu anotsanangura, vataridzi vanozogona kunyatsonzwisisa nhoroondo yeTaiwanese fashoni indasitiri, pamwe nehunhu hwayo uye hunhu mamiriro.
"Vagadziri vefashoni vezvizvarwa zvakasiyana, mukutarisana nematambudziko munguva dzakasiyana uye nekuwedzera kwekukwikwidza kwemusika wepasi rose, vagara vachiratidzira kushingairira kusingamisiki kwemafashoni," akadaro Florence Lu, Curator weTaiwan Fashion History.
Iyo theme curation yeFashoni Yedu Nguva inokoka varatidziri kuti vafambe kuburikidza nenzvimbo uye nguva yekudzoka kune dzakapfuura nguva dzemaTaiwanese fashoni. Kubva kukona yemachira indasitiri muma1950s kusvika zera razvino rekushandurwa kwedhijitari mumafashoni midhiya, chiratidziro chinoratidza kuti vagadziri vemuno nemabrands vane uye vanoramba vachishandisa fashoni kutsanangura basa reTaiwan mutsika dzepasi rose.
Zvakare nekuvhurwa kweFashoni yeNguva Yedu yekuratidzira, Taipei Fashoni Vhiki zvakare yakaita musangano wayo wechi 35 wepagore weTaiwan Fashoni Design Awards inoitirwa neInstitute Development Bureau, Ministry of Economic Affair muna Gumiguru.
Kubva kune vangangoita mazana mana nemakumi mana evatori vechikamu kubva munyika dzese gumi nematanhatu dzakatenderedza Europe, America neAsia, gumi nembiri mafashoni akaonekwa pachiitiko chesimba chekuratidzira.
Mubairo wekutanga wakaenda kuna Gajadeera naRuwanthi Pavithra vanobva kuSri Lanka nebasa ravo "Sustainable Fashion / Textile uye Tsika Dzemabasa Ekugadzira". Yechipiri-nzvimbo mibairo yakaenda kuna Yeh, Yu-Hsien's basa "Mirage" na Chen, Ching-Lin's "Ko maruva ese aenda kupi." Taipei Fashoni Svondo iri kumhanya kubva zvino kusvika Svondo, Gumiguru 17.